Hodges University Admissions »Yakagadzirirwa Kushanda Vakuru
Ndiyo Chete Iri Kutanga YENYAYA YAKO
Kunge SIWE Kuzadzisa Kurota Kwavo
Kwemakore Anopfuura makumi matatu!
Sezvakangoita Iwe Kuzadzisa Kurota Kwavo
Kwemakore makumi matatu apfuura
Gadzirisa YAKO Zvakaitika
Tora Charge YAKO Ramangwana Nhasi!
Chii Chichava Yako #MyHodgesStory Ichave?
Sangana naDr John Meyer, Mutungamiri weHodges University uye Two Time Hodges Vakapedza Kudzidza
#MyHodgesStory inogona kunge iine akawanda eayo maganhuro ayo ako. Ndakatanga basa rangu semakanika wemotokari uye muridzi webhizinesi. Mushure memakore angangoita makumi maviri, ndakafunga kuti yaive nguva yekuchinja. Mhuri yangu neni takatamira kuFlorida, uye nekurudziro yavo, ndakatanga rwendo rwangu kuHodges (yainzi International College), ndikapedza zvese neBachelor's uye Master's degrees. Kushanda uye kutsigira mhuri, pamwe nekuenda kukirasi kunotora kuzvidzora kwakawanda, asi ini ndaiziva kuti pakupedzisira zvese zvaizofanirwa.
SaMutungamiri, zuva randinodisisa kupedza. Zvinopa mubayiro zvikuru kuona mafaro pazviso zveumwe neumwe wedu akapedza danho. Vanopfuura zviuru gumi vadzidzi vakapemberera kudzidza mumakore makumi matatu apfuura. Asi kunyangwe zuva rekupedza kudzidza riri, chinangwa chedu fakaroti nevashandi paHodges University kugadzirira vadzidzi vedu, kwete yekutanga chete, asi mazuva ese apedza kudzidza.
Hodges University zvirokwazvo inzvimbo yakakosha uko vadzidzi vedu vanogona kusvika pazvinangwa zvavo zvedzidzo uye zvebasa. Ndiyo nzvimbo yaunogona "Gara Pedyo uye Enda Kure."
Hodges U Akaverengerwa # 2! - 2021 Makoreji Akanakisa muFlorida neMubairo Chikamu
Bachelor Degree Center: 10 Yakawanda Inodhura Pamhepo Bachelor muGraphic Dhizaini ye2020
Iwo Akanaka Makoreji: 2020 Yakanakisa Pamhepo Makoji muFlorida
Zvikoro Zvakanakisisa: Iwo makumi maviri neshanu akanakisa online Bachelor's muCybercrime Zvirongwa
Yakanakisa Koreji Ongororo: Wepamusoro 25 Pamhepo Bachelor's Zvirongwa muGraphic Dhizaini
Zvikoro Zvakanakisisa: 2020 Yakanakisa Pamhepo Bachelor's Software Injiniya Dhigirii
Akanyanya Paralegal Chikoro Pamhepo: Iwo epamusoro gumi Akanakisa epamhepo Paralegal Degree Zvirongwa
Pamhepo U: 2019 Yakawanda Inodhura Pamakoreji Makoreji eMutemo Degrees
SR Dzidzo Boka: 2020 Yakanakisa Pamhepo Makoji muFlorida
Wepamusoro Pamhepo Chete Zvirongwa
Welcome to Hodges University's Online Chirungu Grammar Chirongwa, inoteedzana sisitimu yekunzwisisa echirungu magirama mapatani kubva ekutanga kusvika epamberi hunyanzvi mazinga. Yedu yega-inoenderana purogiramu yepamhepo yakagadzirirwa zvakanyanya kune vakuru vasiri veChirungu vatauri kuti vanzwisise girama uye vataure Chirungu nechivimbo. Wana hunyanzvi hwaunoda mumazita, zviito, zvikamu,…
Dzidza zvinobudirira nzira dzekutengesa dzinoisa iwe pamberi pemakwikwi.
Sarudza dombo rakatsika padanho rako ramangwana, chero vangave vaine Interdisciplinary Studies degree.
Dhizaini Dhizaini uye Graphics
Shandisa hunyanzvi hwako hwekugadzira nehunyanzvi nedhigirii muDhijitari Dhizaini uye Graphics.
Wana Mubairo-Unokunda Kurovedzwa Kwevane Paralegal uye Zvepamutemo Mabasa.
Flexible Inoshandiswa Psychology Degree iri Rakakura Kune Chero Basa.
Shanda munyika yakazara nhamba ine Degree muAccounting.
Pamhepo Degree Zvirongwa Kuongorora
Kutungamira-Edge Pamhepo Degree Zvirongwa
Chii Chinoita Kuti Hodges Dzisiyane
Hodges Yunivhesiti, Yakanangidzirwa pa iwe. Yese degree degree, yega nzira yekudzidza, purofesa wese, uye nhengo dzese dzechikwata. Isu takatsaurirwa kuna kukurudzira iwe kuzadzisa dzidzo iwe yaunofanirwa nehupenyu nebasa raunoda.
kwakarongwa yakagadzirirwa kukugadzirira iwe kuti utange basa rako pa Zuva Rimwe!
Kugamuchirwa ne5 Yakasiyana Kubvumidza Masangano.
Kusarudzwa se Mepanishi Kushumira Institution nokuda Hispanic Association yemakoreji neMayunivhesiti - Hablamos Español
Hodges Yunivhesiti Mhedzisiro Yemabasa Ekubudirira Rate iri 93%.
Anonzi "Wepamusoro 40 Akanakisa Makoreji muFlorida".
Masoja / Veteran Shamwari Makampasi ane Akazvitsaurira Vet Nzvimbo.
ainzi Yemauto Nguva Zvakanakisa 2018-2020.
pamwedzi Nzira kutanga Mazuva.
Yakarongwa se Wepamusoro Chikoro Chakachengeteka.
Zvikoro zvepanyama mune zvose Naples uye Fort Myers
Kirasi Imwe Pamwedzi Hyper Inotarisa Fomati ndichibvumira Yakazara- kana Chikamu-chenguva Kunyoresa
Yakabatanidzwa Certification mukati medu Degree Programs
30 Years Kushumira Dzidzo yepamusoro vadzidzi
Makirasi akapa Online, On-kembasi, Blended, kana TEC Formats. TEC makirasi anotendera iwe rusununguko rwekutora mamwe makirasi kurarama kubva chero kupi zvako munyika.
Kutsvaga Iyo Yakakodzera Degree Chirongwa kuri Nyore.
Clinical Mental Utano
Computer Ruzivo Technology
Chirungu Semutauro Wechipiri
Chekutanga Line Supervisor Kudzidziswa
Izvo chete Chokwadi
Therapy Therapy Mutevedzeri
Professional Dzidzo uye Kudzidziswa
Chinjana Kiredhiti Shamwari
Chinja Nyika Kuti Zvizvarwa Zvizouya
Pamusoro Mapurogiramu Ehutano
Sarudza Hodges BSN kukudziridza hunyanzvi hwehunyanzvi hwaunoda kuti ubudirire kutanga zuva rekutanga
Kuuya manje! Hodges Dental Hutsanana Chirongwa ichapa iyo dzidzo inodiwa kuti ikure mune yakanyanya-kudiwa munda weDental Hutsanana! Sekureva kweCareer Onestop, Dental Kubatsira inotarisirwa kukura 23% na2026 muFlorida. Iva pakati pekutanga. Kana iwe uchitsvaga basa rinokura newe,…
Emergency Medical Services (EMS) - Zvirongwa zveParamende
Pedzisa Paramedic Kudzidziswa neyedu Emergency Medical Services zvirongwa.
Nheyo dzeDental Kubatsira
Nyorera Nhasi! Iyo Hodges Batanidza Nheyo dzeDental Assistant Program ichapa hwaro hunodiwa kuti utange mumunda wepamusoro-kudiwa weDental Kubatsira! Sekureva kweCareer Onestop, Dental Kubatsira inotarisirwa kukura 23% na2026 muFlorida. Chirongwa Chekutarisa Ichi chirongwa chakagadzirirwa kuzivisa mutsva ...
Hutano Sayenzi Degree Zvirongwa
Wana hunyanzvi uye kudzidziswa kutarisisa pane kurapwa kwevarwere uye kutsvagisa.
Dzidza kushandisa hunyanzvi hwekutonga uye kudzidzisa kuitira kuti vashandi vakwanise kutarisa pane izvo zvinonyanya kukosha - hutano hwevarwere.
Yakarongwa Pakati Pakanakisa!
Iyo Mamirioni-Mamirioni emadhora Ekumba Basa
Michelle Spitzer wekutanga basa rechikoro kuHodges yaive chirongwa chebhizinesi chakatungamira kune mamirioni emadhora emadhora bhizinesi zano! Chii chako #MyHodgesStory kuva?
Chero mudzidzi akambopokana nekuita kwemabasa emakirasi haana kumbosangana naMichelle Spitzer.
Kutanga seyakareruka kirasi chirongwa, Spitzer akatora chirongwa chebhizinesi chakanyorwa pakutanga kwedzidzo yake kuHodges University ndokuchichinja kuita yakanyanya grossing franchise yeMaidPro munyika.
Mumwe wavo business management mapurofesa akatozova chipangamazano wake, achipa rutsigiro pakudzidza uye mutsika sezvo Spitzer aishanda kupedzisa dzidzo yake uye panguva imwechete kutanga bhizinesi rake.
Kana aigona kutaura akananga kumudzidzi asina chokwadi nezve kutsvaga dzidzo yepamusoro? "Shandura hupenyu hwako nekudyara mauri," anodaro. “Wakakodzera!”
Hodges 'Mukuda Zvirongwa
Kutanga Yako #MyHodgesStory Nhasi
Inotevera Temu Kutanga Zuva
PTA Ruzivo Chikamu
Tora danho rekutanga kune rinopa mubayiro basa rehutano sePhysical Therapy Mubatsiri Dzidza nezve matangiro aunogona kuita muHodges University yeCAPTE inozivikanwa chirongwa chePhysical Therapist Assistant nhasi. Anofarira kuva…
Zvichida uye 4501 Colonial Blvd, Kuvaka U, Kamuri U361 Fort Myers, Florida 33966, Kamuri U361
Bachelor yeSainzi muNursing (BSN) Informational Sessions
Bachelor yeSainzi muNursing (BSN) Informational Sessions Joinha iwo mahodhi eHodges Magamba! Hodges University's Bachelor of Science in Nursing (BSN) chirongwa chinopa mukana wakatanhamara wekudzidzisa kuvadzidzi uye mashandiro emunhu ...
Kuvaka U mukamuri 209 kana Virtual
Inzwa Kubva Kubva Hodges U Vadzidzi
Hodges chiitiko chikuru. Iwe haugone kuverengera. Iwe une vadzidzisi vakazvipira, vane rudo, uye vakazvipira vanozvipa zvese zvavo. Mamiriro ekudzidza haana kunaka. Iwe unonzwa unogamuchirwa uye unoda kudzidza. Dzidzo haimanikidzwe uye munhu wese anodiwa. Vadzidzisi vanonamira newe pane zvakanaka nezvakaipa uye vanokuzivisa iwe uri mumwe munhu. Iko kuyedza kwechikwata uye sisitimu huru yekutsigira gore rese. Hodges akandidzidzisa kuwedzera kukurudzira uye kuzvipira mune zvese zvandinoita.
Ndakanakidzwa neinternet. Zvakaita kuti zvikwanise kuti ndiende kuchikoro ndichishanda nguva yakazara uye ndiri single mom. Basa racho raikwanisika uye mapurofesa aishamisa. Ini zvechokwadi ndaizokurudzira Hodges University kune vamwe.
Hodge University yanga iri chikoro chinoshamisa kuenda. Ini ndatora makirasi kubva kuzere-nguva-chikamu-nguva, ndichichinjika nekudzoka pamusoro pemakore mashanu apfuura, ini ndichishanda izere-basa basa. Ndichiri kutsvaga makirasi ekuenda uye nekuvhiringidzika kuti ndeapi makirasi ainyatsokodzera degree rangu, ndakasangana nemushandi akazvipira weHodges uyo akaita kuti maitiro acho ave nyore uye asingarwadzi. Mai Jeanette Colon vanga vari godend. Anogara achiwana nguva yekundibatsira, kupindura mibvunzo, uye kuona kuti zvinhu zvinoitwa nenguva. Kuzvipira kubasa rake kunoshamisa uye nzira dzake dzekushinga dzinondibatsira kuti ndirambe ndichipfuurira. Ini ndanga ndatofunga kupedzisa Master's Degree rangu nekuti rinokurudzira kwazvo. Ndinokutendai nekuva naMai Colon semushandi. Ndinovatenda zvikuru nekushanda kwavo nesimba.